Ọ Dịtụbeghị Onye Ọzọ Si Otú A Kwuo Okwu | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
E ZIPỤ NDỊ ỌRỤ NCHE KA HA GAA JIDE JIZỌS
NIKỌDIMỌS AGBACHITERE JIZỌS
Jizọs ka nọkwa na Jeruselem, ebe a na-eme Ememme Ụlọ Ndò. Obi tọrọ ya ụtọ na “ọtụtụ ndị n’ime ìgwè mmadụ ahụ nwere okwukwe n’ebe ọ nọ.” Ma, obi adịghị ndị ndú okpukpe ndị Juu mma. Ha zipụrụ ndị ọrụ nche, ya bụ, ndị e nwere ike ịkpọ ndị uwe ojii ha, ka ha gaa jide Jizọs. (Jọn 7:31, 32) Ma, Jizọs agbaghị ọsọ.
Kama ịgba ọsọ, Jizọs nọgidere na-akụziri ndị mmadụ ihe n’ihu ọha na Jeruselem. Ọ gwara ha, sị: “Mụ na unu ka ga-anọtụkwu tupu mụ alakwuru onye ahụ zitere m. Unu ga-achọ m, ma unu agaghị ahụ m, unu apụghịkwa ịbịa ebe m nọ.” (Jọn 7:33, 34) Ndị Juu aghọtaghị ihe ọ na-ekwu. Ha ana-agwarịta ibe ha, sị: “Olee ebe nwoke a bu n’uche ịga, nke mere na anyị agaghị ahụ ya? Ò bu n’uche ịgakwuru ndị Juu gbasasịrị n’etiti ndị Grik ka o wee zie ndị Grik ihe? Gịnị ka okwu a o kwuru pụtara, nke bụ́ ‘Unu ga-achọ m, ma unu agaghị ahụ m, unu apụghịkwa ịbịa ebe m nọ’?” (Jọn 7:35, 36) Ma, ihe Jizọs na-ekwu okwu ya bụ ọnwụ ọ na-aga ịnwụ na mkpọlite a ga-akpọlite ya n’ọnwụ, ya agaa eluigwe, ebe ndị iro ya na-agaghị eruteli.
O ruola n’abalị nke asaa nke Ememme Ụlọ Ndò. N’ụtụtụ ọ bụla kemgbe ememme a malitere, onye nchụàjà na-awụba mmiri si n’Ọdọ Mmiri Siloam n’ime nnukwu efere ka o si ebe ahụ sọrọ sọba n’ebe ịchụàjà. Jizọs kwuziri ihe ọ ga-abụ na o ji ya mee ka ndị mmadụ cheta ihe a onye nchụàjà na-eme. Ọ sịrị: “Ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ onye ọ bụla nkụ, ya bịakwute m ṅụọ mmiri. Onye nwere okwukwe n’ebe m nọ, dị nnọọ ka Akwụkwọ Nsọ kwuru, ‘Mmiri nke na-enye ndụ ga-esi n’ime ya na-asọpụta.’”—Jọn 7:37, 38.
Ihe Jizọs na-ekwu bụ ihe ga-eme mgbe a ga-eji mmụọ nsọ tee ndị na-eso ụzọ ya mmanụ, ha enwezie olileanya ịga eluigwe. E tere ha mmanụ ahụ mgbe Jizọs nwụchara. Malite n’ụbọchị Pentikọst nke afọ na-esote afọ Jizọs kwuru ihe ahụ, ọtụtụ ndị malitere inweta mmiri nke ndụ n’ihi na ndị na-eso ụzọ Jizọs e ji mmụọ nsọ tee mmanụ bidoro ịkọrọ ọtụtụ ndị eziokwu gbasara Kraịst.
Ụfọdụ ndị nụrụ ihe Jizọs kụziri kwuru, sị: “Onye a bụ n’ezie Onye Amụma Ahụ.” Ọ ga-abụ na onye amụma ha bu n’obi bụ onye amụma ahụ ka Mozis ukwuu nke e kwuru na ọ ga-abịa. Ndị ọzọ nọkwa na-ekwu, sị: “Onye a bụ Kraịst.” Ma, ndị ụfọdụ nọ na-ajụ, sị: “Kraịst ọ̀ ga-esi na Galili bịa? Ọ̀ bụ na Akwụkwọ Nsọ ekwughị na Kraịst ga-esi n’agbụrụ Devid, na ọ ga-esi na Betlehem bụ́ obodo nta ebe Devid biri?”—Jọn 7:40-42.
Ihe a mere ka ìgwè mmadụ ahụ ghara inwe otu olu. Ọ bụ eziokwu na o nwere ndị chọrọ ka e jide Jizọs, ma o nweghị onye bitụrụ ya aka. Mgbe ndị ahụ e zipụrụ ka ha gaa jide Jizọs lọghachiri gbara aka Jizọs, ndị isi nchụàjà na ndị Farisii jụwara ha, sị: “Gịnị mere unu akpọtaghị ya?” Ndị ọrụ nche ahụ zara ha, sị: “Ọ dịtụbeghị onye ọzọ si otú a kwuo okwu.” Iwe bịara ndị ndú okpukpe ahụ, ha emewezie ndị ọrụ nche ahụ akaja, na-agwakwa ha okwu ọjọọ. Ha sịrị ha: “È duhiewokwa unu onwe unu? Ọ̀ dị otu n’ime ndị na-achị achị ma ọ bụ n’ime ndị Farisii nke nwere okwukwe n’ebe ọ nọ? Ma ìgwè mmadụ a nke na-amaghị Iwu ahụ bụ ndị a bụrụ ọnụ.”—Jọn 7:45-49.
Mgbe ihe a nọ na-eme, Nikọdimọs, bụ́ onye Farisii na onye so ná ndị Sanhedrin, katara obi gbachitere Jizọs. Ọ sịrị: “Iwu anyị ọ̀ na-ekpe mmadụ ikpe ma ọ bụrụ na o bughị ụzọ nụ n’ọnụ onye ahụ wee mara ihe ọ na-eme?” Ha zara ya, sị: “Gị onwe gị kwa, ì si na Galili? Chọọ n’Akwụkwọ Nsọ, ị ga-ahụ na ọ dịghị onye amụma ga-esi na Galili.” Ihe dị ka afọ abụọ na ọnwa isii tupu ihe a emee, Nikọdimọs bịakwutere Jizọs n’abalị, mee ka ọ mara na ya nwere okwukwe n’ebe ọ nọ.—Jọn 7:51, 52.
O nweghị ebe Akwụkwọ Nsọ kwuru na onye amụma ga-esi na Galili bịa. Ma, o kwuru ihe gosiri na Kraịst ga-esi na Galili bịa n’ihi na ọ sịrị na a ga-ahụ “oké ìhè” na “Galili nke ndị mba ọzọ.” (Aịzaya 9:1, 2; Matiu 4:13-17) Ihe ọzọ bụkwa na a mụrụ Jizọs na Betlehem bụ́ ebe e buru n’amụma na a ga-amụ Mesaya, Jizọs sikwa n’agbụrụ Devid bụ́ agbụrụ e buru n’amụma na Mesaya ahụ ga-esi abịa. Ọ bụ eziokwu na o nwere ike ịbụ na ndị Farisii macha ihe ndị a niile, ma ọ bụ ha kọọrọ ndị mmadụ ọtụtụ ihe na-abụghị eziokwu ha kweere banyere Jizọs.
Gịnị ka Jizọs kwuru banyere mmiri, nke mere nwere ike ime ka ndị mmadụ cheta ihe a na-eme n’ụlọ nsọ n’ụtụtụ ọ bụla n’oge a na-eme Ememme Ụlọ Ndò?
Gịnị mere ndị e zigara ka ha gaa jide Jizọs ejidelighị ya, gịnịkwa ka ndị ndú okpukpe mere?
Olee ihe gosiri na Kraịst ga-esi na Galili bịa?